HomeEntertainmentအောင်လ အတွက် ထူးထူးခြားခြား အားပေးမှုတစ်ခု ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ မင်းရာဇာ
ပရိသတ်ကြီးရေ၊ မင်းရာဇာ ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့တခဲနက်အားပေးမှုကိုရရှိနေတဲ့ စွယ်စုံရအနပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး နယ်ပရိသတ်တွေတခဲနက်အားပေးခဲ့ရတဲ့ အနပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ့ရဲ့ ဘဝကိုအဓိကပုံဖော်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့မင်းရာဇာကတော့ အနပညာလောကမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့ အနပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မင်းရာဇာတစ်ယောက် နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် အားကစားသမားတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်းကို အားပေးချင်တဲ့အတွက် တကူးတက ကချင်မြေကိုသွားရောက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ မင်းရာဇာက “ညီလေးအောင်လရေ ချစ်လွန်းအားကြီးလို့ မင်းရဲ့မွေးရပ်မြေထိကိုသွားပြီးအားပေးနေတယ် မင်းရဲ့နောက်မှာမြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိတယ်။ အောင်!!! လ!!! အန်!!! ဆန်း!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” ဆိုပြီး လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ကနေတဆင့်ရေးသားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ၊ အောင်လအန်ဆန်းအတွက် ကချင်ပြည်နယ်အထိသွားရောက်အားပေးခဲ့တဲ့ မင်းရာဇာအတွက် မှတ်ချက်ကနေ တစ်ခုခုပြောခဲ့ကြပါဦး
အောငျလ အတှကျ ထူးထူးခွားခွား အားပေးမှုတဈခု ပွုလုပျလိုကျတဲ့ မငျးရာဇာ
ပရိသတျကွီးရေ၊ မငျးရာဇာ ကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့တခဲနကျအားပေးမှုကိုရရှိနတေဲ့ စှယျစုံရအနပညာရှငျတဈယောကျဖွဈပွီး နယျပရိသတျတှတေခဲနကျအားပေးခဲ့ရတဲ့ အနပညာရှငျတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ပွညျသူတှရေဲ့ ဘဝကိုအဓိကပုံဖျောတဲ့ ဇာတျကားတှနေဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ရငျထဲကိုရောကျရှိလာတဲ့မငျးရာဇာကတော့ အနပညာလောကမှာ နာမညျတဈလုံးနဲ့ ရပျတညျနနေိုငျတဲ့ အနပညာရှငျတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။
မငျးရာဇာတဈယောကျ နိုငျငံ့ဂုဏျဆောငျ အားကစားသမားတဈယောကျ ဖွဈတဲ့ အောငျလအနျဆနျးကို အားပေးခငျြတဲ့အတှကျ တကူးတက ကခငျြမွကေိုသှားရောကျခဲ့တယျလို့လညျးသိရပါတယျ။ မငျးရာဇာက “ညီလေးအောငျလရေ ခဈြလှနျးအားကွီးလို့ မငျးရဲ့မှေးရပျမွထေိကိုသှားပွီးအားပေးနတေယျ မငျးရဲ့နောကျမှာမွနျမာတဈနိုငျငံလုံးရှိတယျ။ အောငျ!!! လ!!! အနျ!!! ဆနျး!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” ဆိုပွီး လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါကနတေဆငျ့ရေးသားဖျောပွထားတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ ပရိသတျကွီးရေ၊ အောငျလအနျဆနျးအတှကျ ကခငျြပွညျနယျအထိသှားရောကျအားပေးခဲ့တဲ့ မငျးရာဇာအတှကျ မှတျခကျြကနေ တဈခုခုပွောခဲ့ကွပါဦး